Shiinaha Sanduuqa waraaqaha soo saarayaasha iyo alaableyda | Hongning
Shayga Sanduuqa waraaqda Kraft oo raqiis ah oo waara sanduuqyo kala duwan oo midabbo kala duwan ah Logo sanduuqa warqadda iibka kulul ee cuntada degdegga ah
Midab Midabka warqadda Kraft midabka khaaska ah
Cabir Waraaq Kraft ah
Qaabka Ilaalinta deegaanka
Amarka Custom Marka loo eego shuruudaha muunada macaamiisha
NOQ Codsi caado
Midab Sanduuqa waraaqda ee ilaalinta deegaanka
Cabir Sanduuqa Cuntada ee degdegga ah, sanduuqa bariiska
Qaabka Sanduuqa waraaqda la tuuro
Qaab Cabbirka caadiga ah: 1,000 cabbirka loo habeeyay: 10,000
Habka wax soo saarka ee sanduuqa waraaqaha.
Marka hore: warqadda dayactirka warqadda, nidaamkan waxaa ka mid ah waraaqda dayactirka iyo khadka cadaadiska. Dayactirka warqadda waa ka duwan yahay siligga riixaya. Mashiinka qaybinta waraaqaha ayaa la qaatay.
Iska yaree kartoonka si aad geeska warqadda uga dhigto mid hagaagsan oo hagaagsan. Mindida waraaqda lagu kala bixinayo waa inay noqotaa mid fiiqan, ma jiri karto darajo. Haddii daabku uusan aheyn mid fiiqan, markaa kartoonka la jaray wuxuu leeyahay haraaga waraaqaha, wasakhda, iwm, taas oo horseedi karta in alaabada daabacan aysan buuxinin shuruudaha. Cadaadiska xariiqda waxaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo mashiinka goynta qadka.
Ta labaad: Daabacaadda kartoonka. Daabacaadda khadku waxay leedahay hal daabicid. Waa daabacaad fudud iyadoo la adeegsanayo nooc silsilad ah si kartoon loogu diro daabacaadda si toos ah. Waxaa jira noocyo kale oo daabacaad ah, sida daabacaad laba jibbaaran. Sababtoo ah farqiga u ah alaabta ceeriin, nuugista warqadda way ka duwan tahay. Qaar ka mid ah waxqabadka nuugista ayaa hooseeya, heerka qalajinta ee khadku wuu gaabis yahay; Qaar ka mid ah waxqabadka nuugista ayaa hooseeya, heerka qalajinta ee khadku waa dhakhso.
Seddexaad: jeexdin, adoo adeegsanaya makiinad ku duuban kartoonada daabacan, mabda'a aasaasiga ah wuxuu la mid yahay mashiinka goynta qadka.
Tan afraad: sanduuqa ciddiyaha ama sanduuqa dhajiska oo ay weheliso kartoonka, waa hadba sida ay macaamiisha ugu baahan tahay inay ku musbaarto sanduuqa ama ku dhejiso sanduuqa. Haddii aad u baahatid inaad musbaar ku garaacdo si aad u isticmaasho mashiinka sanduuqa, sanduuqa ku dheji isticmaalka mashiinka jinka sanduuqa.
Tan shanaad: baakadaha kartoonka baakadaha, kartoonka ayaa ku dhegan, qaybinta qaab-dhismeedka wareejinta, baakadaha iyo isku-geynta.
Tan lixaad: bakhaarka kormeerka, kartoonnada buuxan ee bakhaarka loo diray.
Xiga: Koob warqad ah